China Mini Linear Actuator FD5 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Sanxing
Ny FD5 Linear Actuator dia Sanxing Mini Linear Actuator, namboarina tamina vatana matevina ary kely kokoa ny habeny. Ampiasaina betsaka ho an'ny automatisation an-trano, ny cabinetry, ny indostrian'ny fambolena, ny indostrian'ny fiara, ary ny robotika.
1. PRICE mivantana mivantana.
1500N (Push) / 1200N (Misintona)
5 ~ 35mm / s
25 ~ 1000mm
Troboka + 105mm
15%, ajanony mandritra ny 17 minitra aorian'ny fiasana 3 minitra tsy tapaka
Mainty / Sliver
Ny acteuror FD5 dia be mpampiasa amin'ny varavarankely, noho ny habeny, ka safidy tsara ho an'ny mpanokatra varavarankely.
Ny acteuror FD5 dia be mpampiasa amin'ny fananganana kabinetra (toa anay ny kabinetra condiment ao an-dakozia) sy ny vatasarihana.
Ampiasaina be izy io ho an'ny mpanara-maso ny masoandro.
Tsena fanondranana lehibe an'ny mpiorina FD5
12-volana aorian'ny fivarotana, ny mpampiasa amin'ny toe-javatra mahazatra, miaraka amin'ny olan'ny kalitaon'ny actuator linear vokatry ny tsy fahombiazan'ny mekanika na ny fahasimbana, dia tompon'andraikitra amin'ny fikojakojana ny orinasa.
Seranan-tsambo FOB: Ningbo / Shanghai
Unit isaky ny baoritra fanondranana: Fitaovana 12 isaky ny baoritra amin'ny ankapobeny
Refy sy lanja isaky ny singa: Raha ny lazain'ny daroka nataon'ny actuator tamin'ny ankapobeny
Haben'ny fonosana: Araka ny fitokonan'ny mpikatroka
Fe-potoana:Amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 4-5 andro fiasana ho an'ny santionany. Ho an'ny kaomandy betsaka dia mifanaraka amin'ny habetsaky ny baiko voafaritra.
Teo aloha: Linear Actuator 24v FD4
Manaraka: Fomba fanamarihana kely Actuator elektrika kely FD5-DW
Hanara-maso Linear Actuator 12v 24v FD3
Fast Speed ​​Electric Cylinder Actuator FD9
Actuator haingam-pandeha haingam-pandeha, Actuator Linear Micro, Fanaraha-maso lavitra ny fandriana fitsaboana, Fanaraha-maso lavitra an-tariby ho an'ny hopitaly, Fanaraha-maso lavitra ny fandriana elektrika, Fanaraha-maso lavitra ny fandriana any amin'ny hopitaly,